Screen Printing Machine, Ihuenyo Printer, Hot zọ Machine - Lanlin Printech
Ọtụtụ narị afọ ndị ahịa
Anyị na-etinye ahịa afọ ojuju mbụ na-agbalịsi ike gafere gị anya. Ọ dịghị mgbe anyị n'ihe ize ndụ jeopardizing aha gị.
Anyị na gị bụ ọrụ pụrụ ịtụkwasị obi na onye òtù ọlụlụ na-kwekọrọ omume na usoro ziri ezi ụkpụrụ.
Anyị isi mbanye n'azụ ọhụrụ bụ ịchọta ihe ngwọta ndị na-enwe ike agafe na ndị a uru ka anyị ahịa.
Anyị na-enye gị udo nke uche. I nwere ike ịbụ na-echegbu onwe-free, ezere ndị na-abụghị uru na-akwụ ụgwọ na-enwe ike na-elekwasị anya na ihe ị na-ezi ihe na.
Anyị ahịa: cosmetic beauty decoration, daily chemical industry, glass containers and caps decoration, plastic container and cap industry, food bottle decoration, drinking water bottle decoration, electron industry, home appliance, pharmaceutical, baby bottle, large bucket, toys, paper printing, flat glass printing, etc.
Anyị ngwaahịa: screen printing machine, hot stamping machine, heat transfer machine, pad printing machine, auxiliary machine and consumable.
Anyị otu: ahụmahụ na ukwuu ruru eru ke eletriki, n'ibu na pneumatic emebe na ọrụ.
Anyị mgbe-sales support: zuru ụwa ọnụ, ngwa ngwa, ọrụ na efu mkpesa.
Ịga nke ọma anyị: consistent focus on client’s need.
Anyị ozi: dedicated to provide more intelligent, more effective and easier operation automatic products and perfect services with high quality. Helping our clients to benefit from our products and services.
Anyị niile ahịa
Enweghị ike na-arụ ọrụ? Kọmputa gị freezes?
Anyị ga-enyere gị aka inwe azụ work.Fast na qualitatively.
Gaa na iji page